Muuse Biixi oo sheegay in madaxweyne Gaas kala hadlay xiisadda Tukaraq – Puntland Post
Posted on May 26, 2018 May 26, 2018 by CCC
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo maanta mar kale ka hadlay xiisadda colaadeed ee ka jirta degaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland ay ka wada-hadleen sidii loo joojin lahaa dagaalka, balse nabaddii laga qaadan waayey.
Biixi ayaa sheegay in ciidamada Somaliland ay horay u tegi jireen degaanka Tukaraq ee gobolka Sool,islamarkaana aanay wax dhibaato ah ka imaan jirin,laakiin haatan la siyaasadeeyay arrinta dagaalka dhalisay,sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamada Somaliland ee Tukaraq la wareegay bishii Jennaayo ee sannadkaan,ayuu sheegay in halkaasi u doonteen biyo,maadaama ay jiilaal dheer ahayd oo kuleyl darani jiray,isagoo tilmaamay in marnaba aysan ciidankiisu dhib u wadin dadka degaanka.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay dabada ka riixayso xiisadda u dhexaysa Puntland iyo Somaliland ee ka aloosan gobolka Sool,gaar ahaanna degaanka Tukaraq.
Muuse Biixi ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay doonayso xoog in ay ku qabsato Somaliland,si ay caalamka in Somaliland tahay gobol hoostaga magaaalada Muqdisho oo ay ka taliso dowladda Federaalka Soomaaliya.
“Puntland iyo Somaliland isma hayaan. Waa laba deris ah,waa dad isku mid ah wax allaaale iyo wax ay isku qabsadaan ma jirto. Waxaa weeye siyaasad dowladda Muqdisho ay soo go’ysay oo ay doonayso in ay ku xaqiijiso ama ay hir-geliso,in ay tahay dowlad ka talisa Somaliland in aanay jirin wax la yiraahdo qaran Somaliland uu yahay gobol ay Xamar ka taliso”,ayuu yiri madaxweyne Biixi.